Bahrain: Tsy Mandray Anjara Amin’ny Lalao Olaimpika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Jolay 2012 9:10 GMT
Vakio amin'ny teny Català, Español, Ελληνικά, Deutsch, Svenska, Swahili, বাংলা, English
Nampiasa Twitter i Nasser nandritra ny fitokonana, ary nisioka tamin'ny anarany manokana, nandrahona ny hamaly faty ireo izay manohitra ny fitondrana izy. Raha nanomboka nitaky ny fanesorana azy tsy handray anjara amin'ny Lalao Olaimpika ny hetsika, nofafany avokoa ny siokany avy eo.
Tamin'ny fety fanokafana ny Olaimpika, nisioka ity sarin'i Nasser Bin Hamad miaraka amin'ny minisitry ny Raharaham-bahiny ao Barhain ity ilay mpikatroka Jamila Hanan (@JamilaHanan):
@Bahrainycitizen: Voarohirohy aminà fampijaliana ireo gadra i Nasser Bin Hamad kanefa navela hanatrika ny fety fanokafana ny #Olympics izy
@kennethlipp: Reko fa nanatrika ny Olaimpika ny fianakavian'ny mpanjaka ao Bahrain. Misy firenena mandroso afaka misambotra azy ireo izao dieny izao .
@khalidibrahim12: Tsy misy isalasalana fa manohitra ny etika sy ny fitsipika rehetra napetraka amin'ny #Olympics ny fanasana ilay mpampijaly olona ao #Bahrain izay nasain'ny governemantan'i #Uk.
@MARYAMALKHAWAJA: RT raha manaiky ianao: Tsy mankasitraka ny lalao #olympics2012 aho satria na dia eo aza ny zava-misy, dia mbola navelan'ny fanjakana #UK hanatrika ny #Olympics ihany ilay mpampijaly olona ao #Bahrain
@alaashehabi: Tsy misy fifaliana raha ny fahitantsika ny ekipan'i #Bahrain #Olympics miaraka amin'ireto Bahrainita hafa (tsy tena Bahrainita)-malahelo ny fontsika noho ireo atleta 20 nogadraina
@JustAmira: Teraka tao Ethiopia sy Kenya avokoa ny ankamaroan'ireo ekipa avy ao #Bahrain #Olympics. Tsy fantany fa manana fiarahamonina Bahrainita midadasika izahay any.
@JustAmira: Mahafinaritra ho an'i #Bahrain raha misy fifaninanana #teargassing (fandefasana baomba mandatsa-dranomaso) ao amin'ny #Olympics
@ATEEKSTER: Tsy misy fanatanjahatena ho an'ny “fitorahana Molotov” ny Lalao Olaimpika ratsy loatra, raha tsy izany tokony ho azontsika ny medaly volamena amin'izany.
@Taltool11: ahoana indray ny momba ilay lalao mampiasa bala tena izy mba hijerena raha maty ianao rehefa mitifitra aho